Ndechipi ruvara runonzi fuchsia? Uye kuti ungapfeka sei?
Nenguva nenguva tinosuruvara nekudzikama kwemashoko akanaka e pastel shades, uye iwe unoda chimwe chinhu chinoshushikana uye chakajeka. Uye zvino proscenium inouya neinoti "ruvara rweBarbie." Chimwe chinopenya chinoputika muzhenje reziso chinounza muto wemafungiro edu kusvika kumusoro. Icho chiri kungoudza musikana wacho pamusoro pezvakaita kuti izvi zvive zvinonakidza, isu tinowanzotambura nezvinetso, kuvhiringidza tsanangudzo. Iko inonzi pink inowirirana, pane mavara asina hanya nevana, kune cold cold, uye pane vamwe. Heino nzira yekuudza nefoni firipi iyo iri-fuchsia? Nzira yekutsanangurira chii chaunofarira hauna kuuya nemumvuri werufaro-mutsara unofara, asi chimiro chinotarisana nemaruva?
Hungu, inowanzotenda kuti zita iri rakagara nhaka iyi mumvuri kubva pane chimwe chinhu chinoshamisa fluffy inflorescences. Nenzira, ruvara rwecclamen, iro rinowanzovhiringidza, runobatanidzwawo nenyika yebhodanki. Kusiyana pakati pevadzivisi ava vaviri vari mumashure mashoma. Saka, mumvuri wakanyanyisa wechando ane chirevo chakatsvukuruka chimiro is cyclamen. Asi kana kune mhepo yakasvibirira yakasanganiswa mavara matsvuku, ndeupi mutema? Fuchsia, hongu, ndiye.
Mafungiro emutauriri uyu kuvakadzi vemafashoni ndeyemhando. Zvose nokuti ane simba rakasimba, iro rinogona kutamba mumaoko emahedheni, uye zvichida kunyange kuisimudzira kumucheto. Asi kana ukashamwaridzana naye, zvino chipfeko chemafashoni chemafuta chinopisa chichasimbisa zvakakwana unhu hwemwene wayo. Uye bhonasi ichave iyo yekuyemura kutarisa kwevanhu vakavapoteredza.
Kune ruvara hauna kupwanya chitarisiko chako, unofanira kunyatsopinda muvharobhe yako. Uye hazvina basa kana iwe uri brunette kana blonde, zvinyoro zvitsvuku zvekutinhira kwekombiki hazvizokukuvadzi. Accessories, lipstick, lip gloss. Ngatitamirei kuchitarisiko chakajeka zvishoma nezvishoma.
Kutanga, ngatitaurirei denderedzwa yematonhe ayo anofungidzirwa kuti akabatana nehutano hwemavara akadaro. Ndeupi mumvuri uchasimbisa huvakidzani? Ndeupi ruvara? Fuchsia inotaridzika zvakanaka nechephena nechena (iyo mbiri hairevi nekutakura uye, sekutonga, usapopotedzana nomumwe munhu). Zvakanaka kubatana pamwe ne gray, izvo zviduku zviduku zvinoputika.
Chisarudzo chakanaka chingave chakabatanidzwa nehuturu hwebhuruu uye yakachena yepepuru. Vanobva kune rumwe rudzi rwehama uye vachave vakakodzera kudzvinyirira chiremera cheumwe.
Cherechedza kuti chipfeko chemafuta (chinyorwa chinogona kungosimbisa izvi) chinoratidzika chinonakidza pedyo nechetete shangu. Mune izvi hapana chinhu chisinganzwisisiki, sezvo ruvara chaihwo rwunobva kumiti yemiriwo, ipapo kubatana kwayo nezvose zvakasikwa, zvisikwa zvinonzwisisika. Uye chii chinowanzoitika kunze kwekuona inflorescence pink pane tsvina yegwenzi?
Zvakanaka, ndechipi ruvara rwekutsvaga, takaronga zvishoma. Rinoramba riripo chete kuedza simba rake remashiripiti pamunhu wake pachake. Uye zvinoshamisa zvechokwadi. Fuchsia ichabudirira mumvuri kunyange tan yakawanikwa muzororo refu yakamirira. Kana kupa chigadziko chakareruka (oh, ichi chitarisiko chakajeka) utano utano pasina chero zvigadzirwa zvezvenje. Uye zviri nyore, fuchsia inounza mutsara unofadza pamusoro pezuva rakaoma rechando, kana iwe ukatora mukana uye utenge chipfeko kana shangu yezasi yemuvara uyu.
Europe mabhii - machira emaketeni
Nhungamiro yezano: turquoise jeans nezvinofanira kupfeka?
Chivakwa Chechivakwa - marudzi evanhu shangu
Thomas Berger - rudzi rwepi?
Nike futsal: mapikicha uye kuongororwa
Slim Shapewear Combi: reviews, size. Kusanganiswa kwechirongwa chekugadziriswa
How kuita akodhiyoni mapepa nemaoko ako?
Rare mutambo pfuma "terrarium": chlorophyll
Kuzviremekedza-care, pashure pemakore makumi mana
Tinoenda pamagumo evhiki kusvika kugungwa muPirogovo
DayZ Standalone. System zvinodiwa uye Gameplay
Tuning "Reno Daster": kure-mugwagwa chikara
Nhanga muffinit: yokubika (more)
Sei vanobatanidza yemuruoko yakagadzirwa chingamu: a phased tsananguro
Sei I exchange cordless sikurudhiraivha iri samambure nemaoko avo: instructions, nematurusi uye zvinhu
Frederick chirwere: kurapwa uye kudzivirira
How zvakaitika ane HIV bvunzo zvakarurama?
A fenzi rakagadzirwa machira simbi; kunaka uye rakavimbika